ရုံးအလုပ်တွေကို စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ အိမ်မှာလုပ်နိုင်ဖို့
မာကတ်တင်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အလွတ်တန်းအလုပ်လုပ်သူ (freelancer) တွေအနေနဲ့ အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတာနဲ့တူတဲ့အရာ ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကို လက်ခံကြမှာပါ။ ဘယ်အရာကမှ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာရယ် အချိန်ကို လိုသလိုချင့်ချိန်လုပ်နိုင်တာတွေကို အစားမထိုးနိုင်သေးပါဘူး။ သို့ပေမယ့်လည်း အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတာက တကယ့်ကို စိတ်ပျက်စရာတွေလည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ သင်လည်း အခုဆိုရင် စိတ်ပျက်နေပြီ မဟုတ်လား။ တကယ်ကို အဆင်မပြေနေတာကို စာရေးသူနားလည်ပါတယ်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း အဆင်မပြေဖြစ်ဖူးလို့ပါ။ ကြုံဖူးလို့ပါ။
ပြဿနာတွေမရှိဘဲနဲ့ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်တယ် (Working from Home) ဆိုတာလည်း ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ COVID-19 လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး ကူးဆက်ပြန့်ပွါးနေလို့ အိမ်မှာပဲ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ အလုပ်ထဲမှာလိုပဲ စိတ်အားတက်ကြွထက်သန်စွာနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းလည်း ရှိဖို့လိုလာပြန်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အလုပ်ထဲကို ပိုအာရုံစိုက်စေဖို့၊ စိတ်အားပိုထက်သန်စေဖို့နဲ့ အလုပ်ပိုဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့ နည်းဗျူဟာ (၇) ခု ကို အကြံပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါစေ။ (Network Access)
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု (network) ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် အလုပ်မှာ အရေးကြီးပါတယ် အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက်ဆိုရင် ပိုပြီးအရေးကြီးပါသေးတယ်။ အာဖရိက စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ “မြန်မြန်သွားချင်ရင် တစ်ယောက်တည်းသွားပါ။ ခရီးပိုရောက်ချင်ရင် တခြားသူတွေနဲ့အတူသွားပါ (If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with others.)” တဲ့။ တစ်ယောက်တည်းအိမ်မှာနေရင်းအလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့ ခရီးရောက်ဖို့ဆိုတာက ရုံးနဲ့ချိတ်ဆက်မှ အဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပြောဆိုချိတ်ဆက်ကြမယ်၊ သတင်းအချက်အလက်ပို့ကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်ပေးနေတာမဟုတ်တော့တာကို သိလာပါမယ်။ သူတို့နဲ့အမြဲအချိတ်အဆက်ရှိနေလို့ကိုယ့်အတွက် သတိပေးနေသလိုဖြစ်ပါမယ်။ အလုပ်အတွက် တွန်းအားလည်းဖြစ်စေပါမယ်။ ဒါကြောင့် ရုံးကနေပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်လိုင်းတွေ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေကောင်းမှ ကိုယ့်အိမ်ကနေ အလုပ်ကို မပျင်းမရိ မငြီးမငွေ့လုပ်နိုင်မယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်။
၂။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုရှိပါ (Get dressed)
ဆိုရိုးစကားတစ်ခုကိုကြားဖူးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ “အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဝတ်စားဆင်ယင်ပါ (dress for success)” ပါပဲ။ ဒါဖြင့် ဒီလိုဝတ်စားဆင်ယင်တာက အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကိုယ့်အတွက်ကော တကယ်အသုံးဝင်ပါ့မလားလို့ သံသယဖြစ်မိမှာပါ။ သင့်ကိုယ်သင် မေးကြည့်ရအောင်။ “ငါဝတ်စားဆင်ယင်တာတွေက ငါ့ရဲ့တစ်နေ့တာအတွက် စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမှုရှိဖို့၊ အလုပ်တွေပိုပြီးမြောက်ဖို့နဲ့ဆိုင်လား” ဆိုတာကို သင့်ကိုယ်သင် ခဏမေးကြည့်လိုက်ပါ။ လက်တွေ့လူမှုစိတ်ပညာ ဂျာနယ် “The Journal of Experimental Social Psychology” က သုတေသနတစ်ခု လုပ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ သုတေသနအရ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပညာရှင်တချို့ကို သူတို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းဝတ်စုံတွေ ကုတ်အင်္ကျီတွေကိုပဲ ဝတ်ဆင်ခိုင်းထားပြီး အိမ်မှာနေရင်း အလုပ်တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။ ရလာဒ်အနေနဲ့ ယခင်က အိမ်နေရင်းအဝတ်တွေနဲ့ ဖြစ်သလို အလုပ်လုပ်တာထက် ယူနီဖောင်းဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်တာဟာ အလုပ်ထဲမှာ ပိုပြီးတော့ အာရုံစိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ကိုလည်း ဂရုတစိုက်နဲ့ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်ရင် အိမ်မှာလည်း ရုံးဝတ်စုံယူနီဖောင်းကို ဝတ်ဆင်ပြီး အလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
၃။ အိမ်မှာ အလုပ်အတွက် သီးသန့်ရုံးခန်းနေရာ ထားပါ။ (HaveaSeparate Office Space at Home)
အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အလုပ်အတွက် သီးသန့်နေရာထားတာက အလုပ်နဲ့ဘဝကို မျှတစေရုံသာမက အလုပ်မှာလည်း ကြာရှည်လုပ်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာပဲလုပ်နေရင်တော့ အနှောက်အယှက်တွေအများကြီးကို ကြုံတွေ့နေရမှာပါ။ ဥပမာ - သူငယ်ချင်းဆီကဖုန်းလာတာ၊ ခြံထဲမှာ ခွေးဟောင်တာ၊ ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေက ကိုယ်နဲ့အတူဆော့ဖို့ စောင့်နေတာ ဒါတွေက အလုပ်အတွက် အနှောက်အယှက်တွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ သီးသန့်နေရာတစ်နေရာကို ရှာပါ။ ဒီအနှောက်ယှက်တွေက လွတ်ဖို့ပါ။ ပြတင်းပေါက်နဲ့နီးတဲ့နေရာမျိုး၊ သဘာဝအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရနိုင်တဲ့နေရာမျိုး စတဲ့သီးသန့်နေရာမျိုးကိုသက်မှတ်ပြီး အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ကြည့်ပါ။ သဘာဝအလင်းရောင်ကိုထိတွေ့တာက အလုပ်အပေါ်မှာ စိတ်ကျေနပ်မှုပိုရှိစေတယ်။ အလုပ်ပိုဖြစ်တယ်။ ကောင်းကျိုးပိုဖြစ်တယ်လို့လည်း လေ့လာချက်တွေအရ သိရှိရပါတယ်။ ဒီတော့ အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ သီးသန့်နေရာထားဖို့လိုပါပြီ။
၄။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူမျိုးနဲ့ ရင်းနှီးနေပါစေ။ (HaveaCareer Mentor)
ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု Network ရရှိတယ်ဆိုတာကလည်း အတိုင်းအတာတွေ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပြီး ရင်းနှီးပေးဆပ်ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ကိုယ့်လိုပဲ အိမ်မှာနေရင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူမျိုးနဲ့ ရင်းနှီးထားရင် အဆက်အသွယ်ရှိနေရင်လည်း အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပြီးအားတက်ပါတယ်။ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူနဲ့ အရမ်းချမ်းသာတဲ့သူဌေးတွေဆီမှာဆိုရင် အဲဒီလိုမိတ်ဆွေတွေ ရှိနေပါတယ်။ အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်မပြေရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ကူးတွေ အကြံဉာဏ်တွေကို မျှဝေစရာလူမရှိနေတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အကြံပေးတတ်တဲ့မိတ်ဆွေရှိတာက သင့်အလုပ်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသလို တွန်းအားလည်းဖြစ်စေပါတယ်။
၅။ အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့ရက်တွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ (Exercise during the Work Day)
အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရင်း ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူတွေက လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်သူတွေထက် အလုပ်ပိုပြီး အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ အလုပ်ချိန်က အိမ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လိုအပ်သလို စီစဉ်ပြီး ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ မနက်ပိုင်းမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုရင် တစ်နေ့လုံး အလုပ်ပိုပြီး ဖြစ်ထွန်းတာ၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတာ၊ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ပိုဖြစ်လာတာ စတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို တွေ့ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အိမ်မှာနေရင်း ရုံးအလုပ်တွေကို လုပ်ရတယ်ဆိုတာ လှုပ်ရှားမှုနည်းတာကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အချိန်သက်မှတ်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မနက်ပိုင်းမှာလုပ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ တစ်နေ့တာလုံး အကျိုးရှိစေဖို့ပါ။
၆။ အချိန်ဇယားရှိပါစေ။ (HaveaSchedule)
ရုံးကအလုပ်တွေကို အိမ်မှာလုပ်တာက အချိန်တွေကို အဆင်ပြေသလိုညှိပြီး လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါက အလုပ်ပြီးဖို့ကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချိန်ဇယားနဲ့သာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီပြဿနာတွေကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါပြီ။ ဘယ်နေရာမှာ အချိန်ဘယ်လောက်ပေးပြီးလုပ်မယ်ဆိုတာရယ် ဘယ်တော့အနားယူမယ်ဆိုတာတွေရို သက်မှတ်ရပါမယ်။ များသောအားဖြင့် အချိန်ဇယားမရှိတဲ့အခါ တစ်နေ့တာလုံးကုန်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားစားချိန်တွေ အနားယူချိန်တွေကိုပါ အချိန်ဇယားထဲထည့်ရပါမယ်။ အချိန်ဇယားသက်မှတ်ထားမှ အလုပ်နဲ့ဘဝလူနေမှု သဟဇာတဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါကြောင့် အချိန်ဇယားသက်မှတ်ပြီး အဲဒီအတိုင်းဆောင်ရွက်မှ အဆင်ပြေစေမှာပါ။
၇။ အချိန်တွေဘယ်လိုကုန်နေတယ်ဆိုတာ သိပါစေ။ (Know How You’re Spending Your Time)
သင်ဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုရင် သေချာတာက အချိန်တွေပိုသလိုဖြစ်နေမှာပါ။ ဘယ်သူကမှ သင့်ကို ဖေ့စ်ဘွတ် (Facebook) ဒါမှမဟုတ် ယူကျုက ဗွီဒီယိုကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကြည့်နေလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်သူနဲ့ ဖုန်းပြောနေတယ်ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်မနေကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေ တခြားအရာတွေဆီကို အလွယ်တကူလမ်းကြောင်းလွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ သင်တစ်ယောက်တည်းအလုပ်လုပ်နေတာကို ကြည့်မနေတဲ့အတွက် အလုပ်အတွက် အချိန်ကို အဲဒီတခြားကိစ္စတွေမှာ ဘယ်လောက်ထိ ဖြုန်းတီးပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာ သင့်အနေနဲ့လည်း သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဖုန်းသုံးချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားပြီဆိုတာကိုပြတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် တွေကိုအသုံးပြုပြီး သင့်ကိုယ်သင် ထိန်းနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အခုကစပြီးသတိထားမိပြီဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲသတိထားပြီး အချိန်ထပ်မဖြုန်းမိဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
အနှစ်ချုပ်ကတော့ အလုပ်ကနေ မတတ်သာလို့ပဲ အိမ်ကို ရုံးအလုပ်တွေထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်က အလွတ်တန်းအလုပ်လုပ်သူဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်မနေအခြေအနေတွေကြောင့် အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ရရင် (Working from home) ဆိုရင်တော့ အခက်အခဲတွေ တွေ့ကြရမှာပါ။ စာရေးသူအနေနဲ့လည်း အလွတ်တန်းဘာသာပြန်သူ စာသင်သူဆိုတော့ အချိန်ဖြုန်းမိတာတွေ၊ အိမ်က ဆူညံနှောက်ယှက်သံတွေ၊ အလုပ်နေရာရဲ့ အလင်းအမှောင်တွေ၊ တခြားကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်ထင်သလောက်မဖြစ်ခဲ့ရတာကို တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက် ၇ ချက်အတိုင်း သတိထားဆောင်ရွက်ကြည့်တော့မှ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေကို တွေ့လာပါတယ်။ အဲဒီ ၇ ချက်က သုတေသနပြုထားပြီးမှ ရလာတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေဖြစ်နေတာရယ် ကိုယ်တိုင်လည်း တကယ်ကြုံတွေ့နေတာတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာနေရင်း ရုံးအလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်တတ်ကြပါစေဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အောင်မြင်ကြပါစေ။ ။
မှီငြမ်း - (Steve Olenski, 2015), “7 Proven Ways to Stay Motivated when Working from Home asaMarketer (or Anything else)- Marketing Land”,